Paxil vs. Zoloft: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कम्पनी कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट प्रेस औषधि जानकारी कल्याण कम्पनी मनोरञ्जन खेलहरु औषधि बनाम मित्र समुदाय, कल्याण समाचार, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार भारी खेल
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Paxil vs. Zoloft: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Paxil vs. Zoloft: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Paxil (paroxetine) र जोलोफ्ट (सेर्टरलाइन) एसएसआरआईहरू हो (सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इन्हिबिटरहरू) जुन डिप्रेसन र अन्य मनोवैज्ञानिक अवस्थाहरूको उपचारको लागि संकेत गरिएको छ। एक एसएसआरआई दिमागमा सेरोटोनिन स्तर बढाउँदै काम गर्दछ, जसले लक्षणहरू सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। दुबै प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छ। एसएसआरआई कक्षामा अन्य औषधीहरू छन् प्रोजाक (फ्लुक्सेटीन), सेलेक्सा (citalopram), र लेक्साप्रो (एसिटालोप्राम)। जे होस् Paxil र Zoloft समान छन्, तिनीहरूसँग तिनीहरूको सations्केत र लागतमा उल्लेखनीय भिन्नताहरू छन्।
पाक्सिल र जोलोफ्ट बीचका मुख्य भिन्नताहरू के हुन्?
Paxil र Zoloft एसएसआरआई (छनौट सेरोटोनिन रीअपटेक अवरोधक) औषधि हो। दुबै औषधिहरू ब्रान्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध छन्। Paxil का जेनेरिक नाम paroxetine हो, र Zoloft को जेनेरिक नाम सेटरलाइन हो। जे भए पनि खुराक फरक हुन्छ, Paxil को लागी एक विशिष्ट खुराक दैनिक २० मिग्रि हो, र Zoloft को लागी एक विशिष्ट खुराक दैनिक 50० मिलीग्राम हो। Paxil ट्याब्लेट फारम, साथै विस्तारित रिलीज ट्याबलेट, र निलम्बन मा उपलब्ध छ। Zoloft ट्याब्लेट र समाधानमा उपलब्ध छ।
Paxil र Zoloft बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता (एसएसआरआई) चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता (एसएसआरआई)
जेनेरिक नाम के हो? Paroxetine सर्टलाइन
औषधी कुन रूपमा आउँछ? ट्याब्लेटहरू
विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेट निलम्बन ट्याब्लेटहरू
मानक खुराक के हो? १०-60० मिलीग्राम दैनिक, संकेतमा र उपचारमा प्रतिक्रयामा निर्भरता To०-२०० मिलीग्राम दैनिक, संकेतमा र उपचारमा प्रतिक्रयामा निर्भरता
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? दीर्घकालीन, तपाइँको डाक्टरको निर्देशन अनुसार दीर्घकालीन, तपाइँको डाक्टरको निर्देशन अनुसार
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू; अफ-लेबल सात वर्ष र माथिका बच्चाहरूमा वयस्क, छ वर्ष र माथिका बच्चाहरू
Paxil मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Paxil मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
अवस्था Paxil र Zoloft द्वारा उपचार
Paxil र Zoloft दुबै प्रमुख उदासीनता विकार को लागी संकेत गरीएको छ। Paxil पनि जुनूनी बाध्यकारी डिसअर्डर, आतंक डिसअर्डर, सामाजिक चिन्ता डिसअर्डर, र पैनिक डिसअर्डरको लागि संकेत गरीएको छ। जबकि Zoloft यी अन्य सर्तहरूको लागि संकेत गरीएको छैन, धेरै डाक्टरहरूले यी सर्तहरूको उपचार गर्न यसलाई अफ-लेबल सल्लाह दिन्छन्।
सर्त Paxil जोलोफ्ट
जुनूनी-बाध्यकारी डिसऑर्डर (OCD) हो हैन
सामाजिक चिन्ता विकार हो हैन
Paxil वा Zoloft अधिक प्रभावी छ?
अनियमित, डबल-अन्धामा अध्ययन आतंक विकार को उपचार को लागी दुई औषधि तुलना, Paxil र Zoloft समान रूप बाट प्रभावी पाए। यद्यपि, Zoloft थोरै राम्रो सहन गरिएको थियो, र बिरामीहरूले औषधी बन्द गर्दा राम्रो गरे।
अर्को अनियमित मा, डबल-अन्धा अध्ययन २ax हप्ताको लागि Paxil र Zoloft को, दुबै औषधि प्रमुख उदासीनता डिसअर्डर भएका बिरामीहरूको जीवन स्कोरको गुणस्तर सुधार गर्न समान प्रभावकारी थिए। प्याक्सिल र जोलोफ्ट पनि राम्रोसँग सहन गरिएको थियो, जोलोफ्ट बिरामीहरूसँग कम साइड इफेक्टहरू थिए।
तपाइँको ब्लड शुगर कति हुनु पर्छ?
अर्को अध्ययन Paxil र Zoloft, साथै Prozac, प्रमुख डिप्रेशन र उच्च स्तर चिन्ता (चिन्तित डिप्रेसन) को बिरामीहरुमा हेरे र तीनैवटा औषधि समान प्रभावकारी र राम्रोसँग सहन भएको पाए।
तपाईको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी औषधी तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा मात्र निर्धारण गरिनु पर्छ जसले तपाईको मेडिकल अवस्था (हरू), इतिहास, र अन्य औषधिहरू जुन तपाईले लिन सक्नुहुन्छ Paxil वा Zoloft सँग अन्तर्क्रिया लिन सक्छ।
Zoloft मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Zoloft मूल्य सतर्कताको लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
कभरेज र Paxil बनाम Zoloft को लागत तुलना
जेनेरिक प्याक्सिल (प्यारोक्सेटीन) र जेनेरिक जोलोफ्ट (सेराटलाइन) प्राय जसो बीमा र मेडिकेयर पार्ट डी अन्तर्गत पर्दछ, बीमाविना, नाम-ब्रान्ड पक्सिलको 30० दिनको आपूर्तिको लागत around २$, र ol० दिने जोलोफ्टको आपूर्ति हुनेछ। about 35 को बारेमा लागत। बीमा र चिकित्सा भाग डी कापीहरू योजना अनुसार फरक हुन्छन्। यी औषधिहरूको जेनेरिक संस्करणहरू छनोट गर्नाले ठूलो पैसाको बचत हुनेछ। तपाईं $ 4- $ 25 को लागि तिर्न सक्नुहुन्छ paroxetine र sertraline hcl को बारे मा $ 7-17।
मानक खुराक # ,०, २० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू (जेनेरिक) # ,०, mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू (जेनेरिक)
विशिष्ट मेडिकेयर पार्ट डी कोपे -15 ०-१-15 -12 ०-१२
एकलकेयर लागत -2 4-25 -17 7-17
Paxil vs Zoloft का सामान्य साइड इफेक्टहरू
सब भन्दा साधारण विपरित असरहरु Paxil को मतली, तन्द्रा, टाउको दुख्ने, सुख्खा मुख, र कमजोरी हो। जोलोफ्टको सबैभन्दा सामान्य प्रतिकूल असरहरू मतली, सुख्खा मुख, पखाला, र अनिद्रा हो। दुबै औषधिहरूको साइड इफेक्टको समान सूची छ, तल देखाइएको छ, बिरामीहरूको फरक प्रतिशतले यी साइड इफेक्टहरूको अनुभव गर्दै।
साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
तन्द्रा हो २.%% हो १%%
मतली हो २%% हो २%%
टाउको दुखाई हो १%% हो दुई%
कमजोरी हो पन्ध्र% हो % दिइएको छैन
पसिना हो एघार% हो %%
सुख्खा मुख हो १%% हो १%%
कब्ज हो १%% हो %%
पखाला हो १२% हो १%%
चक्कर हो १%% हो १२%
अनिद्रा हो १%% हो १%%
कम्पन हो %% हो एघार%
नर्भस हो %% हो % दिइएको छैन
कामवासना घटाइयो हो %% हो १%
स्खलन विकार हो १%% हो %%
धमिलो दृष्टि हो %% हैन -
मुहान: डेलीमेड (प्याक्सिल) , डेलीमेड (जोलोफ्ट)
Paxil vs Zoloft का ड्रग अन्तरक्रिया
PAXL वा Zoloft सँग संयोजनमा MAO अवरोधकर्ताहरू (मोनोमाइन अक्सिडेज इनहिबिटर एन्टीडिप्रेससन्टहरू) धेरै खतरनाक र सम्भावित घातक हुन सक्छ। एमएओ अवरोधकर्ताहरूको प्रयोगलाई एसएसआरआईबाट १ 14 दिनसम्म अलग गर्नुपर्दछ। पाक्सिल वा जोलोफ्ट प्रयोग गरी अन्य औषधिहरू जो सेरोटोनिन बढाउँदछ, साथसाथै अन्य एसएसआरआई, एसएनआरआई, वा ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन्ट्ससँग सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिम बढाउन सक्छ। एस्पिरिन र अन्य एनएसएआईडीहरू प्याक्सिल वा जोलोफ्टसँग प्रयोग गर्नु हुँदैन किनकि उनीहरूले रक्तस्रावको जोखिम बढाउन सक्दछन्। धेरै अन्य औषधिहरूले Paxil वा Zoloft सँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्। पूर्ण सूचीको लागि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास Paxil जोलोफ्ट
Parnate (tranylcypromine) MAOI हो हो
ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड हो हो
ओराप (पिमोजाइड) एन्टिसाइकोटिक हो हो
ट्रिपटन्स (माइग्रेन औषधिहरू)
सेन्ट जोन्स Wort ड्रग्स जसले सेरोटोनिन बढाउँछन् हो हो
भाइब्रीड (vilazodone) एसएसआरआईहरू हो हो
प्रिस्टीक (डेसेन्फ्लेक्सिन) SNRIs (सेरोटोनिन र norepinephrine reuptake अवरोधकर्ता) हो हो
मेल्लारिल (थिओरिडाजाइन) एन्टिसाइकोटिक हो हो
कौमाडिन (वारफेरिन) एन्टिकोआगुलेन्ट हो हो
पामेलर (nortriptyline) Tricyclic antidepressants हो हो
मोट्रिन, एडविल (आईबुप्रोफेन) NSAID (गैर स्टेरोइडल विरोधी भड़काउने औषधि) हो हो
थियोफिलिन मेथिलक्साँथाइन हो हैन
फेनोबार्बिटल एन्टिकोनभल्सेन्ट्स हो हो
Paxil बनाम Zoloft को चेतावनी
सबै एन्टीडिप्रेसन्टहरू, Paxil र Zoloft सहित, एक बक्स्ड चेतावनीको साथ आउँदछ जुन एफडीएलाई आवश्यक पर्ने कडा चेतावनी हो। एन्टीडिप्रेसन्ट्सले बच्चाहरू, किशोर-किशोरीहरू र युवा वयस्कहरूमा आत्महत्या विचार र व्यवहारको जोखिम बढाउँछ। डिप्रेसन र अन्य मनोवैज्ञानिक विकारहरूले पनि आत्महत्याको जोखिम बढाउँछन्।
कुनै पनि उमेरका बिरामीहरू जसले एन्टिडिप्रेसन्ट्स लिन्छन् उनीहरूलाई व्यवहारमा परिवर्तन र आत्महत्याको लक्षणहरूको लागि राम्ररी अनुगमन गरिनु पर्दछ, विशेष गरी उपचारको शुरुका केही महिनाहरूमा र खुराकमा कुनै परिवर्तन भएमा। परिवार र हेरचाहकर्ताहरूले बिरामीलाई पनि निरीक्षण गर्नै पर्छ, र कुनै पनि मुद्दाको प्रिस्क्रिटरलाई सूचित गर्नुपर्दछ।
थप रूपमा, त्यहाँ अन्य चेतावनीहरू छन् जुन दुबै Paxil र Zoloft साथ आउँदछन्:
उपचार सुरु हुनुभन्दा पहिले बिरामीलाई द्विध्रुवी विकारको लागि जाँच गर्नु पर्छ। द्विध्रुवीय डिसआर्डर भएका बिरामीहरूको सुरुमा डिप्रेशनको घटना हुन सक्छ। Paxil वा Zoloft द्विध्रुवी विकार को लागी काम गर्दैन, र वास्तवमा द्विध्रुवी विकार बिगार्न सक्छ।
गम्भीर, सम्भावित जीवन जोखिमको अवस्था भनिन्छ सेरोटोनिन सिन्ड्रोम एसएसआरआई एन्टिडिप्रेसन्ट्सको साथ भएको छ। सेरोटोनिन सिन्ड्रोमका लक्षणहरूमा आन्दोलन, मतिभ्रमण, छिटो मुटुको धड्कन, चक्कर आउने, पसिना बग्ने, फ्लशिंग, अस्थिर रक्तचाप, कम्पन, ईकोओर्डिनेसन, दौरा, मतली, बान्ता वा पखाला समावेश हुन सक्छ।
सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको लागि जोखिम बढ्छ जब अन्य औषधिहरू Paxil वा Zoloft सँगै लगिन्छ जसले सेरोटोनिन पनि बढाउँदछ, जस्तैट्राइप्टनहरू, ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन्ट्स, फेन्टानेल, लिथियम, ट्रामाडोल, बसपिरोन, ट्रिपटोफन, एम्फेटामिन, र सेन्ट जोन्स वोर्ट।
PAXil वा Zoloft को एक MAOI (monoamine oxidase inhibitor) सँगको संयोजन खतरनाक हो र contraindication हो। MAOI का उदाहरणहरूमा Eldepryl (selegiline), Azilect (rasagiline), Nardil (phenelzine), र Parnate (tranylcypromine) सामेल छन्। त्यहाँ एक MAOI र एक SSRI को उपयोगको बीचमा १ days दिनको अलग हुनुपर्छ।
Paxil वा Zoloft Mellaril (thioridazine) को साथ प्रयोग गर्नु हुँदैन; संयोजनले भेन्ट्रिकुलर एरिथिमिया निम्त्याउन सक्छ र अचानक मृत्यु हुन सक्छ।
दौरा भएका बिरामीहरूमा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
जब Paxil वा Zoloft बन्द छ, औषधी बिस्तारै टेपर्ड गरिनु पर्छ र अचानक रोकिएको छैन, फिर्ती लक्षणहरू जोगिनको लागि।
हाइपोनाट्रेमिया (रगतमा कम सोडियम), एसआईएडीएच (सिन्ड्रोमको कारण) देखा पर्न सक्छअनुपयुक्त एन्टिडीयुरेटिक हर्मोन स्राव)। डाईरेटिक्स लिने बिरामी वा डिहाइड्रेटेड बिरामीहरू बढी जोखिममा हुन्छन्।
एसएसआरआई औषधिहरूले रक्तस्रावको जोखिम बढाउन सक्छ र एस्पिरिन वा अन्य एनएसएआईडीहरू जस्तै आईबुप्रोफेन वा नेप्रोक्सेन, वा रगत पातलोहरू जस्तै कुमाडिन (वारफेरिन) को साथ प्रयोग गर्न मिल्दैन।
हड्डी भंग हुने खतराको लागि मोनिटर गर्नुहोस्।
Paxil वा Zoloft pupillary dilation कारण हुन सक्छ र anatomically साँघुरो कोण मा बिरामीहरु मा कोण-बन्दको आक्रमण गर्न सक्छ।
गर्भावस्थाको पहिलो त्रैमासिकमा प्याक्सिलको संपर्कले भ्रुणमा हृदय विकृति निम्त्याउन सक्छ र सामान्यतया वेवास्ता गर्नुपर्छ। प्राय: तपाईको डाक्टरले तपाईले गर्भवती भएको बेलामा सुरक्षित वैकल्पिक औषधि पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं प्याक्सिलमा हुनुहुन्छ र तपाईं गर्भवती भएको पत्ता लगाउनुहुन्छ भने, निर्देशनका लागि तुरून्त तपाईंको OB-GYN लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
Paxil vs Zoloft को बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
Paxil के हो?
Paxil (यसको जेनेरिक नाम paroxetine द्वारा पनि चिनिन्छ) एसएसआरआई औषधि वर्गमा एक एफडीए-अनुमोदित औषधि हो, जुन प्रमुख डिप्रेसन डिसआर्डर, ओसीडी, र चिन्ता विकारहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
Zoloft के हो?
Zoloft (sertraline) एसएसआरआई औषधि वर्ग मा एक एफडीए-अनुमोदित औषधि हो, जो प्रमुख डिप्रेसिव डिसअर्डरको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो व्याकुलता विकारहरूको उपचार गर्न अफ-लेबलको पनि प्रयोग गरिन्छ।
Paxil र Zoloft उस्तै हो?
Paxil र Zoloft समान छन्, तर समान छैन। जबकि ती दुबै एसएसआरआई हुन् र उही तरिकाले काम गर्दछन्, तिनीहरूसँग संकेत, डोजि,, र साइड इफेक्टमा फरक छ, माथि वर्णन गरे जस्तै। अन्य एसएसआरआई ड्रग्स सामिल छन् प्रोजाक ( फ्लुओक्सेटीन ), सेलेक्सा (citalopram), लेक्साप्रो (एस्किटालोप्राम), भाइब्रिड (विलाजोडोन), र लुभोक्स (फ्लोभोक्सामिन)।
Paxil वा Zoloft राम्रो छ? / के sertraline paroxetine भन्दा राम्रो छ?
दुबै औषधि राम्ररी सहिष्णु छन् र डिप्रेसनको उपचारका साथै चिन्ताका विकारहरूमा पनि प्रभावकारी हुन सक्छ। यद्यपि Zoloft केवल डिप्रेसन को लागी संकेत गरीएको छ, धेरै डाक्टरहरु चिन्ता को लागी यो निर्धारित गर्दछ। तपाईंको डाक्टरलाई सोध्नुहोस् यदि यी औषधिहरू मध्ये कुनै एक तपाईंको लागि सही हुन सक्छ।
के म गर्भवती हुँदा पाक्सिल वा जोलोफ्ट प्रयोग गर्न सक्छु?
Paxil खतरनाक हुन सक्छ जब गर्भावस्था को पहिलो तिमाही मा प्रयोग, र Zoloft खतरनाक हुन सक्छ जब तेस्रो तिमाही मा प्रयोग। यद्यपि मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण छ - उपचार नगरिएका उदासीनता र चिन्ता पनि खतरनाक हुन सक्छ।
यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भने बिरामी औषधि प्रयोग गर्ने बारेमा तपाईंको डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। यदि तपाईं पहिले नै पाक्सिल वा जोलोफ्ट लिइरहनु भएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो भने, चिकित्सा सल्लाहको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
यो फ्लू हो वा अरु केहि
म Paxil वा Zoloft म रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
दुबै औषधिहरूको लागि निर्माताको जानकारीले संकेत गर्दछ कि बिरामीहरूले Paxil वा Zoloft लिनुहुँदा रक्सी पिउनु हुँदैन।
के Zoloft र sertraline समान कुरा हो?
हो Zoloft औषधि को ब्रान्ड नाम हो। Sertraline जेनेरिक नाम हो। धेरै बिरामीहरू सेर्टरलाइन, जेनेरिक लिन्छन्।
कुन antidepressants कम से कम साइड इफेक्ट छ?
सबै एन्टीडिप्रेसन्टहरू चेतावनी सूचीको साथ आउँदछन् साइड इफेक्ट , माथि उल्लेखित रूपमा। जहाँसम्म, सबैजना फरक छन्, धेरै व्यक्ति बिभिन्न एन्टीडिप्रेससन्टहरु लाई फरक प्रतिक्रिया गर्छन्। कहिलेकाँही यसले कम्तिमा साइड इफेक्टका साथ तपाईको लागि राम्रो काम गर्ने फेला पार्न एक परीक्षण र त्रुटिको लिन्छ।
के Paxil एक राम्रो antidepressant हो?
सबै एसएसआरआई एन्टीडिप्रेससन्टहरू सुरक्षा र प्रभावकारिता स्थापना गर्न विस्तृत क्लिनिकल परीक्षणहरूको माध्यमबाट आएका छन्। तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस् कि पक्सिल तपाइँको लागी सही औषधि हो कि हैन।
एक रस सफा आहार मा? यो मीठो बीट Detox नुस्खा कोसिस गर्नुहोस्
adderall xr बनाम आईआर वजन घटाने को लागी
के हुन्छ जब तपाइँ योजना बी गोली लिनुहुन्छ
लेवाक्विन को लागी काम शुरू गर्न कती समय लाग्छ?
के म एन्टिबायोटिक बाट खमीर संक्रमण पाउन सक्छु?
ज्वरो को लागी नराम्रो तापमान के हो?
के यो पिउन पछि एडविल लिन ठीक छ?
meloxicam 15 मिलीग्राम बनाम ibuprofen 800 मिलीग्राम